အသုံးပြုခံ့ 2009 Aprilia SportCity – Reviews, ဆိုငျကယျသမားမဂ္ဂဇင်းမှာစျေးနှုန်းများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, pictures, ratings, reviews and discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (35161)
'01 1500 FI Drifter, အဘယ်သူမျှမမီးပွား - Kawasaki ဖိုရမ် (11000)
MZ စမှတ်စုများ - Philadelphia တွင်မွငျးစီးစဝီကီ (9540)
KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ (8080)
Peugeot မြန်နှုန်း Fight2အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလက်စွဲစာအုပ်ပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန် ... (7122)
bajaj Pulsar 150 ပုံစံ, Review, နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ... (6218)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (5773)
ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 (5618)
KTM Duke 125/200 RaceDynamics PowerTRONIC afte ရ ... (5488)
နေအိမ် → Aprilia → Used 2009 Aprilia SportCity - Reviews, ဆိုငျကယျသမားမဂ္ဂဇင်းမှာစျေးနှုန်းများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ
အသုံးပြုခံ့ 2009 Aprilia SportCity – Reviews, ဆိုငျကယျသမားမဂ္ဂဇင်းမှာစျေးနှုန်းများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ
15 Mar 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments on အသုံးပြုခံ့ 2009 Aprilia SportCity – Reviews, ဆိုငျကယျသမားမဂ္ဂဇင်းမှာစျေးနှုန်းများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ
Aprilia, the Italian motorcycle and scooter maker, started out making small-displacement machines and, though it has branched out since then, continues to produce its share of well-regarded scooters. Owned by Piaggio, which also owns Vespa, Aprilia introduced its SportCity 250 to the U.S. market in 2007. တွင် 2009, the company expanded the line of step-through scooters, adding the SportCity 50 and SportCity 125.
The SportCity 50 hasa49.9cc, air-cooled, single-cylinder, four-stroke engine; အဆိုပါ 125 model usesa124.9cc, single-cylinder, four-stroke, air-cooled engine. Both are carbureted. The SportCity 250 runs ona244cc, အရည်-အအေး, single-cylinder, four-stroke engine with fuel injection. All three models have an SOHC valve configuration, as well as the continuously variable transmission that is standard for scooters.
The instrument panel offersagenerous array of information: နာရီ, fuel gauge, speedometer, odometer, trip computer, and temperature warning light are standard. The 250 even hasatachometer. All models have lockable under-seat storage, but only the SportCity 250 offers the option of an additional top box (available in three different sizes), plusabackrest. The dash also hasalockable compartment for papers and sunglasses, ပြီးနောက် 250 hasapower outlet so you can charge your phone.
တွင် 2009, the SportCity 50 and 125 came in gray or black; အဆိုပါ 250 was available in gray or blue. The 250 is powerful enough to go from zero to 50 mph inarespectable seven seconds, တစ်ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းနှင့်အတူ 79 mph—meaning that it’s safe to operate on freeways for short jaunts; သော်လည်း, like any scooter, it’s better suited to city commuting. The other two models are strictly for lower-speed use.
Aprilia added two new models to its SportCity line: အဆိုပါ 50 ပြီးနောက် 125
Aprilia Scarabeo 250 ဆိုင်ကယ် Mopeds
2011 Aprilia Dorsoduro 1200: MD စီးနင်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း …
Review: Aprilia Dorsoduro 750 ပေါင်းစုံနဲ့ဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပါတယ် ...
20.06.2015 | ဟာ Off comments on Review: Aprilia Dorsoduro 750 မျိုးစုံစရိုက်နဲ့စက်ဘီးဖြစ်ပါတယ်…
19.06.2015 | ဟာ Off comments on အဆိုပါ Aprilia Dorsoduro ၏ပထမဆုံးတွေ့ကြုံ 1200 – Aprilia ပြန်လည်သုံးသပ်, မော်တော်ဆိုင်ကယ်…
19.06.2015 | ဟာ Off comments on 2011 Aprilia SV 450-Aprili
Aprilia Scarabeo 50 vs 100 Review 1 ဆိုင်ကယ် Moped ...
19.06.2015 | ဟာ Off comments on Aprilia Scarabeo 50 vs 100 Review 1 ဆိုင်ကယ် Mopeds
19.06.2015 | ဟာ Off comments on 2009 Aprilia Mana 850 GT ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း – အဆုံးစွန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
19.06.2015 | ဟာ Off comments on 2010 Aprilia Scarabeo 200 - အသုံးပြုခံ့ 2010 Scarabeo 200 ဆိုငျကယျသမားမဂ္ဂဇင်းမှာ
19.06.2015 | ဟာ Off comments on Aprilia NA 850 Mana နှင့်ဟွန်ဒါ NC 700 S က DCT မော်တော်ဆိုင်ကယ်
19.06.2015 | ဟာ Off comments on WSBK Phillip ကျွန်း: Laverty, ဆူဇူကီးနီးပါးပြပွဲအားကစား Rider ကိုခိုးယူ
ဟွန်ဒါ DN-01 Ducati 60 KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix Ducati Diavel မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto စမတ် eScooter Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် Ducati Desmosedici GP11 ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် စက်ဘီး Kawasaki ER-6n ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို Aprilia Mana 850 Moto Guzzi 1000 Daytona Injection Bajaj Discover ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို ဆူဇူကီး Colleda CO အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic ဆူဇူကီး AN 650 Brammo Enertia ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက်
Saturday | 20.06.2015 | ဟာ Off comments on Kawasaki Ninja 650R 2012 အိန္ဒိယတွင်စျေး & Specifications
Saturday | 20.06.2015 | ဟာ Off comments on 2009 ဟွန်ဒါ CB1000R လမ်းမကြီးစမ်းသပ်ခြင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း- ဟွန်ဒါ CB1000R မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ
Saturday | 20.06.2015 | ဟာ Off comments on ပြောက်: Moto Guzzi နော်ဝေအလှမယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
Saturday | 20.06.2015 | ဟာ Off comments on 2009 Kawasaki Vulcan Voyager 1700 Review – အဆုံးစွန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
Saturday | 20.06.2015 | ဟာ Off comments on ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166
စက်ဘီး, Parts, Accessories, Servicin ...
သင်္ဘော MV Agusta F4 1000 S က – Road Test & Review – ဆိုငျကယျသမားအွန်လိုင်း